iPhone 6 waa telefoonka ah oo uu ka sara bar ee suuqa casriga ah. Haddii aad noqoto qayb ka mid ah ay Apple soo kobcaya, nidaamka iyo raadinayso si ay u sahamiyaan waxa iPhone samayn kartaa, halkan waxaa ku qoran liiska qaar ka mid ah tabaha fudud iyo talooyin.
IPhone 6, waa in la soo xusuustay, ayaa Koox ka mid ah qaababka cusub oo ku cusub, ka suuragelinayo in lacagta si toos ah u dhex technology iPhone in NFC. Waxay leedahay touchscreen weyn oo shidma faraha ah iyo sidoo kale.
Halkan waxaa ku qoran 10 nasteexooyin waxtar leh kuwaas oo aad u isticmaali kartid iPhone 6 / iPhone 6 Plus in si ka fiican.
1. iPhone keyboard trick 1
Waxaa laga yaabaa inaad u bartayba isticmaalaya iPhone ee keyboard. Waa sahlan tahay in ay isticmaalaan oo deg deg ah. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa in aad rabto in aad isticmaasho calaamado on keyboard - ka oo ay lama arki karo by default. Waxaa loo baahan yahay in aad ka jaftaa 123 button on in ay mar kale u helaan calaamado iyo markaas, in xarfaha la furo. Trick waa in halkii dhejinta waaraadka qabtay 123 ilaa ay muujinayso calaamado, ay tagaan astaanta, iyo keyboard waxay u noqon doontaa ABC si toos ah. Tani waxay ka badbaadisaa waqti badan halka aad qortid.
2. iPhone keyboard trick 2
Waxaa jira calaamado badan oo dheeraad ah oo aad heli karto keyboard iyo qaar badan user laga yaabaa arkay. Tag astaanta sida dollar oo qaban calaamad. Waxa aad muujin doonaa calaamooyin ka lacagta la xiriira ee dalalka kale. Waa mid ka mid ah tabaha la qariyey badan ma user ogyahay.
3. iPhone keyboard trick 3
keyboard iPhone ayaa stop buuxda oo ku saabsan category calaamad aad ayaa looga baahan yahay in calaamado la furo wakhti kasta oo aad u baahan tahay stop buuxa. Si kastaba ha ahaatee, tani waa trick baado markii weyn. Waxaad ku dari kartaa stop buuxa by double qasabadda ku bar bannaan. Waxay intaasi stop buuxa si toos ah. Tani waxa ugu waxtar leh oo dhan talooyin iyo trick.
4. Rux qasi
Waa mid ka mid ah safar coolest cusub iPhone 6 dalabyo. Marar badan waxaa laga yaabaa in aad ku qortay xukun dheer oo aakhirka dhejinta waaraadka on backspace dhowr jeer si qalad ah aad la tirtiro fariin. Mar kale makiinada qaadan lahaa wax badan oo ka mid ah dadaalka iyo waqtiga. Si kastaba ha ahaatee, hab qabow qasi on Iphone kuu baajinaysaa waqti. Just gilgil waxaa bidix ilaa midig qasi lahaa tallaabo la soo dhaafay. Si kastaba ha ahaatee, hubi in aad qaban aad si adag wacdo. Idinkuna ma waxaad doonaysaan warqada telefoonka aad gacantaada.
5. tuubada si ay u tagaan si ay ugu sareysa
Waxaan caadaysteen in ay boggan halka Author aad iyada oo xisaabta Twitter, Facebook, ama Instagram. Liiskaan dheer ee updates iyo boostada, waxaa aad u badan yahay. Haddii aad rabto in aad dib ugu sareeya ee ay tagaan kitaab mar kale aad leedahay. Waa hagaag, tuubada fudud sare ee shaashadda oo idinka mid ah iPhone oo aad qaadi doonaa si loo kordhiyo. Trick wuxuu u shaqeeyaa inta badan app ee telefoonka.
6. takhalusid lambar ee ugu danbeysay ee trick calculator
Haddii aad shaqada ku jiraa ganacsi ama xafiiska, halkaas oo aad u baahan tahay badan ee xisaab iyo u baahan tahay inaad isticmaasho calculator iPhone arrin inta badan, markaa waa in aad ku baran khiyaamadaas. Waxaa idinka badbaadin doonaa waqti badan. Haddii aad rabto in aad tirtirto lambar ugu dambeysay ee aad ku soo galay, kaliya mari midig ama bidix ee aagga madow. Waxaa dhakhso badan yahay iyo tagaa la socodka halka xisaabinta.
7. Isticmaal iPhone ee flash in lagu soo noqnoda on fariin cusub
haddii gariir ama dhawaaqa ma awoodo in uu soo jiito inaad fiiro, waxaa jira wax kale oo ku saabsan telefoonka aad isticmaali karto. Mar kasta oo aad hesho fariin cusub aad telefoonka ee flash light bilaabi doonaa biligleynaya. Tag dejinta, guud iyo helitaanka. Waxaad rogto karto hoos qaybta maqalka. Guud ahaan tani waxay kasoo muuqday waxaa loogu talagalay kuwa xaga maqalka. Just shid Flash LED ee qaylodhaan.
8. Search erayo ama weedho ee bogga internetka
Tani waa qalab muhiim ah in la qabto inta daalacanaya. Daalacashada computer ayaa hore u leedahay qalab this. Laakiin waxa kale oo aad isticmaali kartaa adiga ku iPhone. Just ku qor erayada ama weedhaha aad rabto in aad ka raadin. Waxaa jiri doona nooca kala duwan oo natiijo laakiin dooranayaan on this page in ay baadhaan ee bogga internetka.
9. Stop music la maaweelin
Dad badan waxay jecel yihiin in hurudo in music. Dhibaatada ugu wayni waxay tahay haddii aad hurudo, ciyaaryahanka music ay sii ciyaari dheecaan aad batteriga baahneyn. Just isticmaali Stop ciyaaro saacad. Dooro mudada ku haboon waqti aad u baahan tahay si ay u hurudo. Tag saacad app ka dibna garaac saacad. Dooro waqtiga loogu talagalay saacad, oo markaas waa inay fursad u marka saacaddu qayliso dhamaado aad ka yar tahay taas oo ay heli doonaan fursad u stop ciyaaro music. Just ay doorasho. Ku bilow waqtiga marka aad bilowdo taxay music ah.
10. tuuryo click Triple
Waxaa toobiye helitaanka yar in uu noqon karaa isticmaalka weyn. Waxaad isticmaali kartaa toobiye click xaafuun in invert midabka ah ee aad taleefan, taas oo waxtar leh inta ka hawlgala telefoonka hoos iftiin yar yahay. Xataa waxaad Mozilla karaa on qaybaha carceero leh fiican iyo hab faahfaahsan oo dheeraad ah si ay u arkaan. Waxaad ku dari kartaa tuuryo oo ag maraya in ay helitaanka iyo kitaab in toobiye Helitaanka. Waxaad ka heli doontaa midabo invert iyo fursado kale oo badan. Dooro mid aad rabto in aad isticmaasho.
> Resource > iPhone > 10 Talooyin iyo tabaha ah iPhone 6 in aad dooneyso in aad ogaato About